BATISA AMIN’NY RANO, BATISA AMIN’NY FANAHY MASINA. – filazantsaramada
BATISA AMIN’NY RANO, BATISA AMIN’NY FANAHY MASINA.
Publié parfilazantsaramada	 février 27, 2015 Laisser un commentaire sur BATISA AMIN’NY RANO, BATISA AMIN’NY FANAHY MASINA.
« …Fa izay naniraka ahy hanao batisa amin’ny rano no nilaza tamiko hoe: Izay ho hitanao idinan’ny Fanahy sy itoerany, dia Izy no Mpanao batisa amin’ny Fanahy Masina. » Jaona 1:33
Toa zavatra sarotra amintsika matetika ny amin’ny resaka batisa, izay sakramenta iray ao amin’ny Fiangonana Kristiana.
– Ny sakramenta dia ‘’ahitana » ny fiombonan’ny Tenin’Andriamanitra amin’ny zavatra hita maso. Ny zavatra hita maso eto dia ny rano. Koa rehefa tafaombona amin’ny Tenin’Andriamanitra aza eto ny rano dia mitondra fahasoavana ho an’izay mandray izany. Araka izany dia asan’Andriamanitra izany asa rehetra izany fa fitaovana ihany ny olombelona.
– Jaona sy Jesosy: ny maha samy hafa azy dia Jaona mpialoha làlana an’i Jesosy, araka ny Soratra Masina moa dia voalaza fa mpanamboatra ny làlan’i Jehovah, ataovy mahitsy ny làlan’i Jehovah, ny lohasaha ho totofana, ny havoana … raha azo lazaina amin’ny teny fohy dia mpialoha làlana an’i Jesosy ihany izy. Raha izay fotsiny no jerena dia ny mpialoha làlana tsy lehibe noho izay ialohavana, izany hoe Jaona tsy lehibe noho Jesosy: i Jaona koa moa dia olombelona ihany fa Jesosy na dia olombelona aza dia tena Andriamanitra.
– Rano sy Fanahy: samy hafa tokoa izy ireo. Ny rano dia hita maso, fa ny Fanahy kosa dia tsy hita maso. Ny rano dia ilaina eo amin’ny fiainan’ny olombelona fa tena singa miasa amin’ny ampahany lehibe amin’ny fahavelomany ara-batana, koa raha vao tsy ampy rano ny vatan’olombelona dia maty izy (fahafatesana ara-nofo). Ny tsy fananan’ny olona iray ny Fanahy Masina dia manambara koa ny fahafatesana; fa ity dia ny fahafatesana ara-panahy, ary ny olona tsy manana ny Fanahy dia voalazan’ny Soratra Masina fa tsy Azy. izany hoe an’ny devoly, ary dia azo ambara hoe faty mandehandeha.
– Iza ary no manao batisa amin’ny Fanahy Masina?
I Jaona araka izay voalaza eto dia nomen’Andriamanitra fahefana hanao batisa amin’ny rano ihany. ary fantantsika fa maro ny olona nibebaka araka ny tantara. I Jesosy kosa no nataon’i Jaona batisa amin’ny rano nefa nidinan’ny Fanahy Masina sy nitoerany. Iza no nanome fahefana an’i Jaona hanao batisa amin’ny rano? Andriamanitra! (fa izay naniraka ahy hanao batisa amin’ny rano no nilaza tamiko; Andriamanitra io naniraka io). Andriamanitra no mpanome fahefana. Vakiantsika kely ny Matio 28:18-19 » Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any andanitra sy ety an-tany; koa mandehana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Jesosy nandray fahefana, ary eto Izy dia manome fahafana ny mpianatra hanao batisa ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, koa isika koa dia nandray ny batisa avy amin’ny Fanahy Masina avy amin’ny mpianatra izay nomen’i Jesosy fahefana. Koa mba manao ahoana ny fikolokolantsika izany Fanahy sarobidy ao anatintsika izany? Mba omentsika toerana ve ny Fanahy Masina sa ny fanahin’ny devoly no omentsika anjara eo amin’ny fiainantsika? Fidio anio izay fanahy ekenao, fa izay itoeran’ny Fanahy avy amin’Andriamanitra no an’Andriamanitra!
Ny Tompo hampahery antsika!
Publié parfilazantsaramada février 27, 2015 Publié dansUncategorized